Ama-visa ahlehlise uhambo lweChiefs oluya eMorocco - Impempe
Ama-visa ahlehlise uhambo lweChiefs oluya eMorocco
February 10, 2021 Impempe.com
IKaizer Chiefs iphoqeleke ukuqhubeka nokuziqeqesha eNingizimu Afrika ngenxa yokungalungi kwama-visa
IKaizer Chiefs iphoqeleke ukuthi ihlehlise uhambo lwayo oluya eMorocco, lapho iyodlala khona umdlalo weCAF Champions League, ngenxa yenkinga yama-visa.
IChiefs bekumele ihambe ngoLwesithathu ntambama ukuze ithole isikhathi sokuzinza nokuziqeqesha eMorocco.
Ngokwesitatimende esikhishwe yiChiefs ngoLwesithathu, yenze konke okusemandleni ukubambisana nososeshini waseMorocco neziphathimandla zakhona kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Leli qembu laseNaturena lizobhekana neWydad Athletic emdlalweni wokuqala kweyamaqoqo kwiCAF Champions League.
“Ngenxa yokubambezeleka kokwenziwa kwama-visa okuya eMorocco, nokungaxhumani kahle neMoroccan Football Federation, neziphathimandla ezibandakanyekayo, iKaizer Chiefs isale ingenakho ukwenza ngokunye ngaphandle kokuhlehlisela uhambo usuku olulandelayo. Lokhu kuzokwenzeka uma konke kuzosombululeka ngendlela isimo, kuphinde kube nokuxhumana kulabo abathintekayo,” kusho isitatimende seChiefs.
“IKaizer Chiefs ingakuqinisekisa ukuthi ikwenze konke obekudingeka ukuze lube khona lolu hambo. Lokhu kubandakanya nemigomo yeCovid-19 ethinta lolu hambo.
“Ngemuva kwakho konke ukuhlela nokulinda eMoroccan Embassy, ePitoli, iqembu alikawatholi ama-visa alivumela ukuthi lingene eMorocco ukuze liyodla umdlalo walo wokuqala wamaqoqo neWydad Athletic.
“Iqembu lidunguza ebumnyameni njengoba ukuxhumana kungekho nhlobo, futhi iqembu neSafa bengakaze bathole lutho oluvela kwiziphathimandla zaseMorocco mayelana nalolu daba
“Sizoqhubeka nokusebenzisana neSafa namahhovisi enxusa lakuleli elizinze eMorocco, bese sizama nokukhuluma neCAF ukuze lolu daba luxazululeke. Iqembu lisalinde ukuthola ama-visa futhi lizoqhubeka nokuzama ukuwathola kwiMoroccan Embassy ePitoli kusasa (ngoLwesine) ekuseni. Njengoba iqembu lisalindile liqhubekile nokuziqeqesha ntambama (ngoLwesithathu) ukulungiselela uhambo,” kuphetha isitatimende.
Umdlalo phakathi kweWydad neChiefs kumele ube ngoMgqibelo ngo-9 ebusuku. Akwaziwake noma ama-visa azolunga ngesikhathi yini njengoba kunzima nokuthatha uhambo oluya enhla nase-Afrika ngenxa yokujikeleza kwezindiza.
Previous Previous post: Owakuleli uqashelwe isikhundla sokuqeqesha iqembu lesizwe eSouth Sudan
Next Next post: IChiefs ayivunyelwe ukubeka imiconjwana yayo eMorocco